Site na: KongoLisolona: Septemba 12, 2020 00: 10 Enweghị asịsa
Fought nwetụla mgbe ị lụrụ agha nke ihe niile megide mmadụ niile?
Youbuworị akụkụ? Ebee ka ị nọ ebe ahụ tupu ??
Ọ bụrụ otu a, chee itinye ọdụm agụụ na-agụ, nnukwu ozodimgba ugwu nke sitere ọwụwa anyanwụ DR Congo, bea siri ike na anụ ọhịa jọgburu onwe ya n'ime otu oge.
Kedu ihe ga-abụ omume nke anụmanụ ọ bụla?
Onye ga-ebuso onye agha?
Firstnye ga-ebu ụzọ wakpo onye nke ọzọ?
Na n’oge a, gịnị ka ndị ọzọ ga-eme ??
Whonye ka ọnụma ọdụm ahụ ga-adakwasị ya iripịa ya?
The ozodimgba, na-apụghị iguzogide eguzogide nke ya n'obi na aka ya, na-aga ụra onye? Kedu onye bu iwe iwe ga-amali elu?
N'ikpeazụ, onye ga-emenye ụjọ na-asọ oyi iji ilo ya ??
Nke a bụ ebe ndị Rom jidere ibe ha (…) donye ka i chere ga-adị ndụ? Na keyboard gị!
Ọkt30 05: 46